Global Voices teny Malagasy » Ireo nahandro nepali ankafizin’ny chef Santosh Shah indrindra · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 09 Janoary 2021 5:15 GMT 1	 · Mpanoratra Sanjib Chaudhary Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Azia Atsimo, Nepal, Mediam-bahoaka, Sakafo, Saripika, Vaovao Tsara
Santosh Shah. Sary nahazoana alalana.
Rehefa nifarana laharana faharoa  tamin'ny “MasterChef: The Professionals” andiany faharoa taona 2020 karakarain'ny BBC's “MasterChef: The Professionals,” dia lasa malaza ao amin'ny Fanjakana Mitambatra (UK) sy any Nepal i Santosh Shah , ilay Nepali lehiben'ny mpahandro monina ao Londres. Teny an-dalana ho any amin'ny famaranana, nasehon'ity chef 35 taona ity tamin'ny mpitsara ireo karazana nahandro tsy fantatra loatra ivelan'i Nepal
Teraka sy nihalehibe tao Karjanha, distrikan'i Siraha  ao amin'ny lembalemba atsimon'i Nepal, nianihan'i Santosh ny havoana nahatonga azy ho eo amin'ny misy azy amin'izao fotoana. Rehefa tsy afaka tamin'ny fanadinana farany tamin'ny ambaratonga faharoa, dia nifindra hiasa ho mpanasa lovia any India tao amin'ny hotel fandraisam-bahiny iray kintana dimy. Tao izy no niakatra tsikelikely ka lasa mpahandro hanina.
Tamin'ny antsafa iray nifanaovana tamin'ny Nepali Times , nilaza i Santosh fa naka fahasahiana izy raha nifindra nankany Londres tamin'ny taona 2010, saingy namokatra izany rehefa nanomboka niasa niaraka tamin'ireo chefs malaza izy. Tamin'ny fotoana nidirany tamin'ny fifaninanana MasterChef , naka fizàran-draharaha tamin'ny sakafo Nepali tany amin'ireo restaurants tao an-drenivohitra britanika nandritra ny roa taona izy. Nankafy ireo sakafo nokarakarainy sy natolony ny mpitsara, toy ny pudding kodo (millet  na apemba), amot (ravi-manga), gombo (okra-lalo) voasesika, yomari, akoho chilli, ary foza curry.
Podinina apemba (millet kodo), hodi-manga, biscuits amin'ny poavran'i Sichuan avy amin'ny dobera voadio sy kobam-boanjobory, manga natono, voasarimakirana maitso ary gilasin-tsolila. Niriako mihitsy ny hampiseho ireo nahandro (sakafo) ireo.
Nisioka ny Nepaley mpila ravinahitra any ivelany Arun Chaudhary:
Amin'ny fanolorana nahandro Nepali amin'izao tontolo izao, manomboka amin'ny tubular papadum (fofi) mandalo ny terai ka hatramin'ny yomari , nahatratra ny dingana famaranana ny Chef Santosh Shah avy an-tanànan'i Karjanha any Siraha. Mirary soa rahalahy. Ataovy mamirapiratra tahaka izao ihany ny anaran'i Nepal.
Nifampitafa tamin'ny Global Voices tao amin'ny WhatsApp i Chef Santosh hamantatra izay sakafo Nepali tiany sy kasainy hampahafantarina.
“Tiako ny biriya  (nahandro iray avy amin'ny faritra Terai),” hoy izy. “Biriya ahandroana miaraka amin'ny ovy vao nangadiana no tiako indrindra.” Ny Biryia dia natao tamin'ny voan'ahitra (grass peas), ravina voamaintilany na ravina famonosana paty vita amin'ny tsaramaso mungo (mainty) natapy masoandro hamainina. Ampirimina avy eo ireo hohandroana amin'ny vanim-potoanan'ny orana rehefa sarotra tadiavina ny anana.
Nahandro iray hafa tian'i Santosh ampiroboroboina ihany koa ny Airkanchan , izay malaza ihany koa any Bihar, Jharkhand ary fanjakana Indiana hafa. Ravin-tsaonjo, volavolaina miaraka amin'ny kobam-bary na amin'ny kobam-boanjobory ka tetitetehina madinidinika, endasina anaty menaka voatsinapy ary atsoboka ao anaty saosy habobo marihitra – masiatsiaka, masira ary marikivy ny tsirony!
Hamarino anie ny Instagram  an'i Santosh ijerena sakafo betsaka mafilotra avy any Nepal:
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2021/01/09/150918/
 laharana faharoa: https://kathmandupost.com/art-culture/2020/12/18/santosh-shah-who-has-brought-nepali-recipes-to-the-world-declared-runner-up-at-masterchef-professionals
 Santosh Shah: https://en.wikipedia.org/wiki/Santosh_Shah
 Teraka sy nihalehibe tao Karjanha, distrikan'i Siraha: https://kathmandupost.com/art-culture/2020/11/19/never-shy-away-from-thinking-outside-the-box
 fifaninanana MasterChef: https://www.imdb.com/title/tt1281256/
 December 16, 2020: https://twitter.com/chefsantoshshah/status/1339043038509862912?ref_src=twsrc%5Etfw